၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာသည်အပူချိန် ၁.၅ ဒီဂရီကျော်နိုင်သည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ပျမ်းမျှအပူချိန်သည်ခန့်မှန်းထားသည်ထက် ၁.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ရှိ ARCC ၏ထူးခြားသောရာသီဥတုစနစ်သိပ္ပံမှသိပ္ပံပညာရှင်များမှပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ မဲလ်ဘုန်းမြို့မှ (သြစတြေးလျ) မှ, နှင့်» Geophysical Research Letters »ဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေသည်။
အကယ်၍ ၎င်းဖြစ်ခဲ့လျှင်ရာသီဥတုကိုထိန်းချုပ်သောပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာဆယ်စုနှစ် (IPO) ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအရှိန်မြှင့်, အပြုသဘောသို့မဟုတ်နွေးအဆင့်သို့သွားပါ.
1 IPO ဆိုတာဘာလဲ။
1900 မှမေလ 2006 မှ IPO အညွှန်းကိန်း၏လစဉ်တန်ဖိုးများ။
Image - ရာသီဥတုသက်ရောက်မှုအုပ်စု
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် လေထုနှင့်သမုဒ္ဒရာအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်သည် ၅၀ Pacific မြောက်နှင့်ပစိဖိတ်တောင်ဘက် ၅၀ between အကြားရှိဖြစ်ပေါ်သည်။။ ၎င်းတွင်အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသည်။ အပူချိန်မြင့်မားသောနေရာများတွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ပထမသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁ မှ ၅ နှစ်ကြားဖြစ်ပြီးဒုတိယသည်နှစ် ၄၀ နှင့်အထက်ကြာနိုင်သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၆ အထိအပူချိန်မှတ်တမ်းများသည်သင်ယခုရှိနေသောပူနွေးသောအဆင့်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောဤမှတ်တမ်းများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုသည့်အပူချိန်မှတ်တမ်းများရှိခဲ့သည်။ သို့တိုင်လေ့လာမှုကိုရေးသားသူတစ် ဦး ဖြစ်သူ Ben Henley ကပြောကြားခဲ့သည် အပျက်သဘောဆောင်သောအဆင့်ရောက်နေသော်လည်းသူတို့၏သုတေသနက ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ၁.၅ ºCအတားအဆီးကိုပြိုကွဲစေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်.
အကယ်၍ ၎င်းမအောင်မြင်ပါကတိုင်များအရည်ပျော်မှုမြင့်တက်လာခြင်း၊ သဲကန္တာရများသည်ပိုမိုခြောက်သွေ့လာပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်တောင်ပိုင်းနှင့်မက္ကဆီကိုတွင်ပြင်းထန်သောမိုးခေါင်မှုများကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာမြေ၏အပူချိန် ၁.၅ ဒီဂရီကျော်နိုင်သည်